Ngaba UThixo Uthumela I-Call Up?
Ukuqonda ukuba Kutheni Izinto Ezimbi Zenzeka Kubantu Abalungileyo
Izinto ezimbi zenzeke kubantu abalungileyo, kwaye ininzi ixesha asikwazi ukuqonda isizathu.
Emva kokuba siqonda ukuba njengamakholwa, sisindisiwe kwizono zethu ngokufa kukaYesu Kristu , sinokulawula ukuba uThixo uyasihlwaya. Singabantwana bakhe abakhululekileyo ngoku kwaye asikho phantsi kwesigwebo sakhe.
Nangona kunjalo, kukho enye into esinokuyicinga ngayo. Mhlawumbi uThixo usithumelela i-call-up call.
"Kutheni uThixo avumele oku?"
Xa intlekele yentlekele ihlasela, sinokuqiniseka ukuba uThixo olungileyo akakubangeli , kodwa uyayivumela ukuba kwenzeke. Siyazibuza, "Kutheni uThixo avumele oku?"
Yona kanye loo mbuzo uThixo afuna siwubuze.
Emva kokusindiswa kwethu, injongo yesibini kaThixo ebomini bethu kukuthobela umlingani wonyana wakhe, uYesu Kristu . Sonke silahleka ngale ndlela ngamanye amaxesha.
Siyakwazi ukuphazamiseka ngenxa yokukhathazeka, ngokuxakeka, okanye ngenxa yokuba sikholwa ukuba sele 'sanele ngokwaneleyo.' Emva koko, sisindisiwe. Siyazi ukuba asikwazi ukufikelela ezulwini ngokwenza imisebenzi emihle, ngoko akukho nto ifunwayo kuthi, siyaqiqa.
Njengoko kulungiswa komntu, oko kubonakala kunengqiqo, kodwa ayikwanelisi uThixo. UThixo unemilinganiselo ephakamileyo ngathi njengamaKristu. Ufuna sifane noYesu.
"Kodwa andingonanga ..."
Xa kwenzeka into embi, ukusabela kwethu kwamanzi kukubhikisha ukungalungi kwalo. Asikwazi ukucinga nantoni na esiyifaneleyo, kwaye iBhayibhile ithi uThixo uyabakhusela amakholwa?
Ngokuqinisekileyo, usindiso lwethu lukhuselekile, kodwa sibona kumanani eBhayibhile afana noYobhi noPawulos ukuba impilo yethu okanye iimali zethu zingabi, kwaye sifunda kuStefano nabanye abafel 'ukholo ngenxa yokuba ubomi bethu bungakhuselekanga.
Sidinga ukumba ubunzulu. Ngaba sasizibandakanya ngendlela yokungazicini, engafanelekanga, nangona oko senzayo kwakungekona isono?
Ngaba sasingabulumko abaphathi kunye nemali okanye iitalente? Ngaba siye saxolela ukuziphatha kakubi kuba wonke umntu wenzayo?
Ngaba siye savumela ukuba uYesu Kristu abe ngumva emva koko, into esaye kuyo ngeCawa kusasa kodwa yanyusa phantsi uluhlu lwethu oluphambili kwiveki, emva komsebenzi wethu, ukuzonwabisa kwethu okanye nosapho lwethu?
Le mibuzo enzima ukuyibuza ngenxa yokuba sicinga ukuba senza kakuhle. Sasicinga ukuba simthobela uThixo ngokusemandleni ethu. Ngaba bekungekho ibhethi elula kwiphepha elaneleyo, endaweni yeentlungu esizijongayo?
Ngaphandle kokuba sivame ukugxotha iipompo ehlombe. Mhlawumbi siye safumana eziliqela kwaye singabaphulaphula. Uninzi lwexesha lithatha into edidayo ngokwenene ukusiqwalasela nokusivusa.
Ndivukile! Ndivukile! "
Akukho nto eyenza sibuze imibuzo efana nosizi . Xa ekugqibeleni sithobekile ngokwaneleyo ukuba sithengise ngokunyanisekileyo, iimpendulo ziza.
Ukufumana loo mpendulo, sithandazela . Sifunda iBhayibhile. Sicamngca ngefowuni yethu yokuvuka. Sinexesha elide, iingxoxo ezicingayo kunye nabahlobo bethu bakaThixo. UThixo usivuza ngokunyaniseka kwethu ngokusinika ubulumko nokuqonda.
Ngokuthe ngcembe sifumana indlela esimele siyihlambulule isenzo sethu. Siyaqonda apho sasingenasiphelo okanye sinobungozi kwaye sothuswa asizange sibone ngaphambili.
Ngokubi njengokuba ikhokhwe lethu livukile, lisisindise ngexesha. Ngenxa yokukhulula nokubulela, sinokuqonda ukuba izinto zazibe zibi ngakumbi xa uThixo engavumelekanga esi siganeko ukuba asizise ekupheleni.
Emva koko sicele uThixo ukuba asincede sibuyisele ubomi bethu ndawonye kwaye sifunde sifundo ayenenjongo kuloo mava. Ukuvuma ukuvutha komsindo nentlungu, sinqwenela ukuba siqaphele ngoku ngoku kungabikho iifowuni ezivukayo.
Ukubona Ukunyuka Kwakho Ukumema Ngokuchanekileyo
Ubomi bobuKristu abuhlali bumnandi, kwaye nabani na obeneminyaka emininzi banokukuxelela ukuba sifunda ngakumbi ngoThixo kunye nathi ngokweempawu zethu zentlambo, kungekhona ezintabeni.
Yingakho kubalulekile ukuqaphela ukunyuka kwakho kweefowuni njengamava okufunda kwaye kungekhona njengejeziso. Oko kuyacaca xa ukhumbule ukuba uThixo uyashukunyiswa uthando kwaye unenkxalabo enkulu kuwe.
Ukulungiswa kuyadingeka xa uphuma. I-call-up call yenza ukuba ucinge kwakhona izinto eziphambili. Ikhumbuza oko kubaluleke kakhulu ebomini.
UThixo uyakuthanda kakhulu uhlala enomdla ebomini bakho. Ufuna ukugcina usondele kuye, ngokusondele ukuba uthethe naye kwaye uthembele kuye yonke imihla yakho, yonke imihla. Kwaye akunjalo na uhlobo lobawo wasezulwini enilangazelela?
Iiflethi ze-iPhone ze-iPhone kunye ne-iPad
UkuPhuthuka kweMigangatho emfutshane kodwa esebenzayo
I-Biography kaMaría Eva "uEvita" uPerón